သိပြီးပြီလာ?.. အပျိုလေးတွေက လူပျိုများထက် အိမ်ထောင်သည်ကိုကိုတွေကို ပိုပြီး စွဲလမ်းကြတာ ဒါ့ကြောင့်ဆိုတာ..
မိန်းကလေးများက လူပျိုများထက် အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းများကို ဘာဖြစ်လို့ ပိုပြီးစွဲလန်းမိကြတာလဲ..?
(၁) လူပျိုတွေထက် အိမ် ထောင်သည်ယောကျာ်းကပိုစီးပွားရှာနိုင်တယ်ထင်လို့ လား
တကယ်က စီးပွားရှာနိုင်တယ်မရှာနိုင်ဘူးဆိုတာ တစ်ယောက်ချင်းစီအရည်အချင်းနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ် ။ လူပျိုထက် စီးပွားရှာနိုင်အားနည်းလို့ မိသားစုအဆင်မပြေတဲ့အိမ်ထောင်သည်တွေအများကြီးရှိပါတယ် ။
ဒီတော့တွေးရမှာက အပျိုတစ်ယောက်အနေနဲ့ အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကိုမက်မောစွဲလမ်းတာက သူ့ ကိုရေများများလောင်း (ငွေများများပေး)လို့ ဖြစ်နိုင်တယ် ။မပေးနိုင်တဲ့ နေ့ ကော … အဲ့ ဒီ့ အိမ်ထောင်သည်ကြီးကို ခွာမှာလားဒါဆို စဉ်းစားဖို့ လိုပါပြီ ။အမိဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးဖြတ်နေတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူမသိသူမသိတဲ့ပြည့်တန်ဆာဘ၀ထဲသွပ်သွင်းနေတာပါ ။
ပိုက်ဆံရလို့ ကပ်တယ်ဆိုကတည်းက အဲ့ မိန်းမက ပြည့်တန်ဆာပဲ.. ပြည့်တန်ဆာသည်သာငွေကြေးအလို့ ငှာ ယောကျာ်းတွေနဲ့ ပလူးပရောနေတာပါ ။
(၂) လူပျိုတွေထက် အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းက ပိုပြီးချောတယ်ခန့် ညားတယ် ထင်လို့ လား… ဒါကလဲ သူတို့ ရဲ့ နေထိုင်မှု နဂိုရုပ်ရည်နဲ့ ဆိုင်ပါတယ် ။
အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်မှပိုခန့် ညားလာတယ် . သပ်ရပ်လာတယ်ဆိုတာက သူ့ အိမ်ထောင်ရှင်မရဲ့ အရည်အချင်းပါ ။
သပ်ရပ်သန့် ရှင်းနေဖို့ အတွက်လျှော်ဖွတ်မီးပူတိုက်ကိုသူ့ အိမ်ထောင်ရှင်မက ကိုယ်တိုင်မလုပ်ပေးတောင် စီမံခန့် ခွဲထားတာပါ ။
ရုပ်ကိုမက်တဲ့ အမိ သူအိုသွားရင်ကော သဘောကျအုံးမှာလား စွဲလမ်းအုံးမှာလားအမိလဲအဲ့လိုစိတ်ရှိတယ်ဆို အမိဝင်တိုးတာကိုလက်သင့်ခံတဲ့သကောင့်သားအိမ်ထောင်သည်လည်းအမိလို ရုပ်အလှမက်တဲ့ စိတ်ရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိပြုပါ ။
(၃) လူပျိုတွေထက် အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းက ပိုပြီးကြင်နာ ဂရုစိုက်တတ်လို့ လား ။
ကြင်နာဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာက အဲ့ ဒီလူရဲ့အကျင့်နဲ့ ဆိုင်ပါတယ် ။ နောက်ပြီး အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းမှမဟုတ်ဘူး လူပျိုတွေလဲကြင်နာတတ်သလို ဂရုစိုက်တတ်ပါတယ် ။ဒါပေမဲ့နှာဘူးအိမ်ထောင်သည်က သာမန်လူပျိုထက်တော့ မိန်းကလေးတယောက်ကို ဘယ်လိုကျုံးသွင်းရမယ် ကညုရမယ်ဆိုတာ ပိုနားလည်မှာဖြစ်သလို သာမန်လူပျိုထက်တော့ လက်ရဲနှုတ်ရဲမှာပါပဲ ။ သူက အိမ်ထောင်သည်လေ .. မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ တစ်အိမ်တည်းကာလကြာရှည်နေဖူးပါတယ် ။
လူပျိုဘယ်လောက်ရှုပ်ရျုပ် ပွေရှုပ်တဲ့အိမ်ထောင်သည်ကို မမီပါဘူး ။ အဲ့ အတွက် အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းတစ်ယောက်ရဲ့ ကြင်နာမှုအပေါ်သာယာပြီး ငါ့ကိုသူ သိပ်ကြင်နာတာ သိပ်ချစ်တာပါပဲလို့ မထင်ပါနဲ့.. သင် သူ့ အိမ်ထောင်ရှင်မဘ၀မရောက်သေးဘူးမို့ တစ်နည်းး သူနဲ့ တစ်အိမ်တည်းမနေရသေးဘူးမို့ ပါ ။ ခဏတာဟန်ဆောင်တာလောက် ဖုန်းထဲက လေနဲ့ ကြင်နာတာလောက်တော့ လူပျိုတွေလဲလုပ်တတ်ပါတယ် ။မလုပ်တာပဲရှိတာပါ ။
(၄) လူပျိုတွေထက် အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းက ပိုပြီးနားလည်မှုရှိတယ်လို့ ထင်လို့ လား ။
သူက အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ သူသည် အိမ်ထောင်သည် မယားငုတ်တုတ်နဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်တဲ့ အတွက် အမြီးတစ်တန်းတန်းပါနေမဲ့ သူ့ ရဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဆိုတဲ့ နာမည်ဆိုးအရှိန်ကြောင့် နားလည်ပေးနေတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ နားမလည်နိုင်ရင်တောင် နားလည်ပေးပါလိမ့်မယ် ။ အမိဟာ သူ့ မယားမှမဖြစ်သေးတာပဲ ။ အလိုက်အထိုက်နေမှ သူလိုချင်တာရမယ် ။ သူလိုနေတာ ဆက်ရနေမယ်လေ ။ လူပျိုတွေကတော့ နားလည်ပေးချင်မှ နားလည်ပေးနိုင်မယ် အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းလောက်တော့ ဘယ်နားလည်ပေးနိုင်ပါ့မလဲ ..
(၅) လူပျိုတွေထက် အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းက ပိုပြီး sexy ကျတယ်လို့ ခံယူလို့ လား (P.s မိန်းကလေးအချို့ အဲ့လိုခံယူတာမြင်ဖူးပါတယ်)
ဒီလိုတွေးတဲ့ အမိကို ဘယ်လိုအမြင်နဲ့ကြည့်ရမလဲဆိုတာ တွေးမရဖြစ်မိတယ် ။ အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းမှမဟုတ် အဲ့ကိစ္စ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ယောကျာ်းတိုင်း sexy ကျနိုင်ပါတယ် ။ စိတ်ဝင်စားမှုပေါ်မှာပဲမူတည်တယ် ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ အဲ့လို sexy ကျတဲ့ယောကျာ်းနဲ့ ပလူးရှလူးထချင်ရင်တော့ အမိအနေနဲ့ ပြည့်တန်ဆာလုပ်စားသင့်တယ် ။ sexy ကျတဲ့ နှာဘူး ပုရိသ ယောကျာ်းပေါင်းများစွာ အိမ်ထောင်သည် လူပျို တစ်ခုလပ် မုဆိုးဖိုများစွာနဲ့ တွေ့ ဖို့ အခွင့်အရေးရှိတယ်လေ ။ သူများအိမ်ထောင် သူများမိသားစုကိုတော့ အမိရဲ့ တဏှာစိတ်သက်သက်ကြောင့် မဖျက်စီးပါနဲ့။
(၆) လူပျိုတစ်ယောက်ရနိုင်ဖို့ အရည်အချင်း မရှိလို့ လား ။
ဘယ်လိုအကြောင်းဘယ်လိုစိတ်ကြောင့် အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းကိုစွဲလမ်းမိတာဖြစ်ပစေ ၊ အကြမ်းအားဖြင့်တော့ အမိဟာ လူပျိုတစ်ယောက်ကို မရနိုင်လို့အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းကို ထောင်ဖမ်းတယ်လို့ ပဲ သတ်မှတ်ခြင်းခံရပါမယ် ။ ဒါကို မကျေမနပ်မဖြစ်လေနဲ့ ပြောခဲ့ ပြီးပါကောလားး အိမ်ထောင်သည်ဟာ လူပျိုထက်တော့ အချစ်နယ်ပယ်မှာ တစ်ဆင့်နိမ့်ပါတယ်လို့။ လူပျိုတစ်ယောက်ကိုရနိုင်လျက် အိမ်ထောင်သည်ကိုမှ တမ်းတမ်းစွဲမိနေပြီဆိုရင်တော့ အမိမှာရောဂါတစ်မျိုးမျိုးစွဲကပ်နေပြီဆိုတာ သေချာပါတယ် ။ အဲ့ ရောဂါနာမည်က ကြောင်တောင်နှိုက်ချင်တဲ့ ရောဂါ ၊ မယားငယ်ခံချင်တဲ့ ရောဂါ တစ်နည်း သူများလင်တပြီးရုးတဲ့မပိုင်လင်တရူးရောဂါပါ။
(၇) ၀ါသနာ ဗီဇ လား ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လားးး ။
၀ါသနာအရဆိုရင်တော့ အမိ စိတ်ဓါတ်အဆင့်ကို ပြန်တိုင်းသင့်ပါတယ် ။ ၀ါသနာဆိုတာ သူတပါးကိုမထိခိုက်စေရဘူးလေ ၊ ဗီဇ ဆိုရင်တော့ အမိရဲ့ မိဘမျိုးရိုးကို လိုက်ဖွေရှာရလိမ့်မယ် မျိုးရိုးလိုက်တာပဲလားလို့ ပေါ့ ။ ဘယ်လိုပဲပတ်ဝန်းကျင်က မကောင်းပစေ သူတို့ ပြောတဲ့ အတိုင်းလုပ်ဖို့ သူတို့ လုပ်တဲ့ အတိုင်းလိုက်ကျင့်ဖို့ သင့်မသင့် ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်တာက အမိနဲ့ ပဲဆိုင်တယ် ။ ကိုယ်တိုင်က သာယာချင်နေတာကို ၀န်ခံရလိမ့်မယ်။
(၈) ၀ဋ်ကြွေးးကြောင့်လား ။
၀ဋ်ကြွေး ဆိုတဲ့ စကားက မပြောချင်ဆုံးစကားပဲ ။ အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို စွဲလမ်းမိတာ ၀ဋ်ကြွေးတဲ့လား ။ ၀ဋ်ကြွေးကြောင့် စွဲလမ်းမိသွားတာပါတဲ့ လား ။ ကမ္ဘာ့ ရယ်စရာအကောင်းဆုံးဟာသ မှတ်တမ်းထဲ အဲ့ စကားထည့်ပေးရမယ် ။ အမိကို အပိုင်ဖမ်းလိုက် ဗလက္ကာရပြုလိုက်ပြီး သိမ်းပိုက်ထားလို့ မယားငယ် ကီပင်ဘ၀ရောက်သွားတယ် အဲ့ ဒီ့ အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းက မတရားသိမ်းပိုက်တယ်ဆိုရင် ၀ဋ်ကြွေးလို့ ပြောရင် တော်သေးတယ် ။ အခု အမိကစွဲလမ်းနေတာ အမိကမပြတ်နိုင်တာက ၀ဋ်ကြွေးတဲ့ လား hak hak။
*** အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းတစ်ယောက်အပေါ် စိတ်ညွတ်နေပြီ စွဲလမ်းနေပြီဆိုရင် ဒီ ၈ ချက်ကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြန်မေးပြီး တွေးကြည့်ပါ ။ ပြီးရင်ထည့်တွက်ရမှာက အမိရဲ့ အရှက်တရားနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အသိစိတ် အမိခေါင်းထဲမှာဘယ်လောက်ကျန်သလဲ တိုင်းတာသင့်တယ် ။ အရှက်မရှိဘူးဆိုရင် ဆက်တိုးပေါ့ ။ ရှက်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆင်ခြင်သင့်တာ ဆင်ခြင်လိမ့်မယ် ။ ဘာသာကိုးကွယ်မှုတွေတော့ထည့်မပြောတော့ပါဘူး ။
မှတ်သင့်တာကတစ်ခုပါပဲ ။ အမိလုပ်သလို တခြားမိန်းမတစ်ယောက်လဲလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ ။ အမိအခု သူတပါးလင်ကို စွဲလမ်းတယ်ဆို အမိလိုပဲတခြားမိန်းမတစ်ယောက်ကလဲ သူ့ ကို စွဲလမ်းမယ် ။ အဲ့သလိုပဲ အမိနဲ့ဆုံစဉ် အမိအပေါ်သူတိမ်းညွှတ်တယ်ဆို အမိမဟုတ်တဲ့ တခြားမိန်းမဆိုရင်လဲတိမ်းညွတ်မှာပါပဲ ။ ဒါဟာ ဘာသာကိုးကွယ်မှု နဲ့ မဆိုင်တဲ့လူတိုင်းနဲ့ ပဲဆိုင်တဲ့ နိယာမပါ ။***
### အထက်ပါအချက်တွေက အပျိုတစ်ယောက်က အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းတွေကို စွဲလမ်းတဲ့ အကြောင်းတွေဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းက တိမ်းညွတ်တဲ့ အခြေအနေပါ ။ ကိုယ့်ကို မတိမ်းညွတ်ပဲ အိမ်ထောင်ရှင်မကို သစ္စာရှိတဲ့အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်း ကို စွဲလမ်းတဲ့ သူတွေကိုတော့ တစ်ခုပဲပြောချင်ပါတယ် ။ ကိုယ့်အဆင့်ကိုယ်သိ ကိုယ့်နေရာကိုယ်သိ မဖြစ်နိုင်တာမမှန်းနဲ့ယောကျာ်းရှားနေတယ်လို့ ထင်ရင် သတ္တ၀ါ အများအပြားရှိပါသေးတယ် ။ ရိုင်းမှာစိုးလို့ မပြောတော့ဘူး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဥာဏ်မီသလောက်တွေးကြည့်ပါ ။ သူတပါးရဲ့ သာယာတဲ့ မိသားစုဘ၀ကို မဖျက်ဆီးပါနဲ့။ သူ့ ဘာသာသူ မသာယာရင်လဲ နဂိုအတိုင်းပဲရှိပါစေ အမိကြောင့်တော့ မပြိုပျက်ပါစေနဲ့ ။
Credit: ပျိုမေတို့ သိစေဖို့
သိပွီးပွီလာ?.. အပြိုလေးတှကေ လူပြိုမြားထကျ အိမျထောငျသညျကိုကိုတှကေို ပိုပွီး စှဲလမျးကွတာ ဒါ့ကွောငျ့ဆိုတာ..
မိနျးကလေးမြားက လူပြိုမြားထကျ အိမျထောငျသညျယောကျြားမြားကို ဘာဖွဈလို့ ပိုပွီးစှဲလနျးမိကွတာလဲ..?
(၁) လူပြိုတှထေကျ အိမျ ထောငျသညျယောကျြားကပိုစီးပှားရှာနိုငျတယျထငျလို့ လား
တကယျက စီးပှားရှာနိုငျတယျမရှာနိုငျဘူးဆိုတာ တဈယောကျခငျြးစီအရညျအခငျြးနဲ့ သကျဆိုငျပါတယျ ။ လူပြိုထကျ စီးပှားရှာနိုငျအားနညျးလို့ မိသားစုအဆငျမပွတေဲ့အိမျထောငျသညျတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ ။
ဒီတော့တှေးရမှာက အပြိုတဈယောကျအနနေဲ့ အိမျထောငျသညျယောကျြားတဈယောကျကိုမကျမောစှဲလမျးတာက သူ့ ကိုရမြေားမြားလောငျး (ငှမြေားမြားပေး)လို့ ဖွဈနိုငျတယျ ။မပေးနိုငျတဲ့ နေ့ ကော … အဲ့ ဒီ့ အိမျထောငျသညျကွီးကို ခှာမှာလားဒါဆို စဉျးစားဖို့ လိုပါပွီ ။အမိဟာကိုယျ့ကိုယျကိုတနျဖိုးဖွတျနတောကိုယျ့ကိုယျကိုလူမသိသူမသိတဲ့ပွညျ့တနျဆာဘဝထဲသှပျသှငျးနတောပါ ။
ပိုကျဆံရလို့ ကပျတယျဆိုကတညျးက အဲ့ မိနျးမက ပွညျ့တနျဆာပဲ.. ပွညျ့တနျဆာသညျသာငှကွေေးအလို့ ငှာ ယောကျြားတှနေဲ့ ပလူးပရောနတောပါ ။
(၂) လူပြိုတှထေကျ အိမျထောငျသညျယောကျြားက ပိုပွီးခြောတယျခနျ့ ညားတယျ ထငျလို့ လား… ဒါကလဲ သူတို့ ရဲ့ နထေိုငျမှု နဂိုရုပျရညျနဲ့ ဆိုငျပါတယျ ။
အိမျထောငျသညျဖွဈမှပိုခနျ့ ညားလာတယျ . သပျရပျလာတယျဆိုတာက သူ့ အိမျထောငျရှငျမရဲ့ အရညျအခငျြးပါ ။
သပျရပျသနျ့ ရှငျးနဖေို့ အတှကျလြှျောဖှတျမီးပူတိုကျကိုသူ့ အိမျထောငျရှငျမက ကိုယျတိုငျမလုပျပေးတောငျ စီမံခနျ့ ခှဲထားတာပါ ။
ရုပျကိုမကျတဲ့ အမိ သူအိုသှားရငျကော သဘောကအြုံးမှာလား စှဲလမျးအုံးမှာလားအမိလဲအဲ့လိုစိတျရှိတယျဆို အမိဝငျတိုးတာကိုလကျသငျ့ခံတဲ့သကောငျ့သားအိမျထောငျသညျလညျးအမိလို ရုပျအလှမကျတဲ့ စိတျရှိနနေိုငျတယျဆိုတာ သတိပွုပါ ။
(၃) လူပြိုတှထေကျ အိမျထောငျသညျယောကျြားက ပိုပွီးကွငျနာ ဂရုစိုကျတတျလို့ လား ။
ကွငျနာဂရုစိုကျတယျဆိုတာက အဲ့ ဒီလူရဲ့အကငျြ့နဲ့ ဆိုငျပါတယျ ။ နောကျပွီး အိမျထောငျသညျယောကျြားမှမဟုတျဘူး လူပြိုတှလေဲကွငျနာတတျသလို ဂရုစိုကျတတျပါတယျ ။ဒါပမေဲ့နှာဘူးအိမျထောငျသညျက သာမနျလူပြိုထကျတော့ မိနျးကလေးတယောကျကို ဘယျလိုကြုံးသှငျးရမယျ ကညုရမယျဆိုတာ ပိုနားလညျမှာဖွဈသလို သာမနျလူပြိုထကျတော့ လကျရဲနှုတျရဲမှာပါပဲ ။ သူက အိမျထောငျသညျလေ .. မိနျးမတဈယောကျနဲ့ တဈအိမျတညျးကာလကွာရှညျနဖေူးပါတယျ ။
လူပြိုဘယျလောကျရှုပျရြုပျ ပှရှေုပျတဲ့အိမျထောငျသညျကို မမီပါဘူး ။ အဲ့ အတှကျ အိမျထောငျသညျယောကျြားတဈယောကျရဲ့ ကွငျနာမှုအပျေါသာယာပွီး ငါ့ကိုသူ သိပျကွငျနာတာ သိပျခဈြတာပါပဲလို့ မထငျပါနဲ့.. သငျ သူ့ အိမျထောငျရှငျမဘဝမရောကျသေးဘူးမို့ တဈနညျးး သူနဲ့ တဈအိမျတညျးမနရေသေးဘူးမို့ ပါ ။ ခဏတာဟနျဆောငျတာလောကျ ဖုနျးထဲက လနေဲ့ ကွငျနာတာလောကျတော့ လူပြိုတှလေဲလုပျတတျပါတယျ ။မလုပျတာပဲရှိတာပါ ။
(၄) လူပြိုတှထေကျ အိမျထောငျသညျယောကျြားက ပိုပွီးနားလညျမှုရှိတယျလို့ ထငျလို့ လား ။
သူက အိမျထောငျသညျယောကျြားဆိုတာ မမပေ့ါနဲ့။ သူသညျ အိမျထောငျသညျ မယားငုတျတုတျနဲ့ အိမျထောငျသညျဖွဈတဲ့ အတှကျ အမွီးတဈတနျးတနျးပါနမေဲ့ သူ့ ရဲ့ အိမျထောငျသညျဆိုတဲ့ နာမညျဆိုးအရှိနျကွောငျ့ နားလညျပေးနတောလဲ ဖွဈနိုငျပါတယျ ။ နားမလညျနိုငျရငျတောငျ နားလညျပေးပါလိမျ့မယျ ။ အမိဟာ သူ့ မယားမှမဖွဈသေးတာပဲ ။ အလိုကျအထိုကျနမှေ သူလိုခငျြတာရမယျ ။ သူလိုနတော ဆကျရနမေယျလေ ။ လူပြိုတှကေတော့ နားလညျပေးခငျြမှ နားလညျပေးနိုငျမယျ အိမျထောငျသညျယောကျြားလောကျတော့ ဘယျနားလညျပေးနိုငျပါ့မလဲ ..
(၅) လူပြိုတှထေကျ အိမျထောငျသညျယောကျြားက ပိုပွီး sexy ကတြယျလို့ ခံယူလို့ လား (P.s မိနျးကလေးအခြို့ အဲ့လိုခံယူတာမွငျဖူးပါတယျ)
ဒီလိုတှေးတဲ့ အမိကို ဘယျလိုအမွငျနဲ့ကွညျ့ရမလဲဆိုတာ တှေးမရဖွဈမိတယျ ။ အိမျထောငျသညျယောကျြားမှမဟုတျ အဲ့ကိစ်စ စိတျဝငျစားတဲ့ ယောကျြားတိုငျး sexy ကနြိုငျပါတယျ ။ စိတျဝငျစားမှုပျေါမှာပဲမူတညျတယျ ။ မိနျးကလေးတဈယောကျအနနေဲ့ အဲ့လို sexy ကတြဲ့ယောကျြားနဲ့ ပလူးရှလူးထခငျြရငျတော့ အမိအနနေဲ့ ပွညျ့တနျဆာလုပျစားသငျ့တယျ ။ sexy ကတြဲ့ နှာဘူး ပုရိသ ယောကျြားပေါငျးမြားစှာ အိမျထောငျသညျ လူပြို တဈခုလပျ မုဆိုးဖိုမြားစှာနဲ့ တှေ့ ဖို့ အခှငျ့အရေးရှိတယျလေ ။ သူမြားအိမျထောငျ သူမြားမိသားစုကိုတော့ အမိရဲ့ တဏှာစိတျသကျသကျကွောငျ့ မဖကျြစီးပါနဲ့။
(၆) လူပြိုတဈယောကျရနိုငျဖို့ အရညျအခငျြး မရှိလို့ လား ။
ဘယျလိုအကွောငျးဘယျလိုစိတျကွောငျ့ အိမျထောငျသညျယောကျြားကိုစှဲလမျးမိတာဖွဈပစေ ၊ အကွမျးအားဖွငျ့တော့ အမိဟာ လူပြိုတဈယောကျကို မရနိုငျလို့အိမျထောငျသညျယောကျြားကို ထောငျဖမျးတယျလို့ ပဲ သတျမှတျခွငျးခံရပါမယျ ။ ဒါကို မကမြေနပျမဖွဈလနေဲ့ ပွောခဲ့ ပွီးပါကောလားး အိမျထောငျသညျဟာ လူပြိုထကျတော့ အခဈြနယျပယျမှာ တဈဆငျ့နိမျ့ပါတယျလို့။ လူပြိုတဈယောကျကိုရနိုငျလကျြ အိမျထောငျသညျကိုမှ တမျးတမျးစှဲမိနပွေီဆိုရငျတော့ အမိမှာရောဂါတဈမြိုးမြိုးစှဲကပျနပွေီဆိုတာ သခြောပါတယျ ။ အဲ့ ရောဂါနာမညျက ကွောငျတောငျနှိုကျခငျြတဲ့ ရောဂါ ၊ မယားငယျခံခငျြတဲ့ ရောဂါ တဈနညျး သူမြားလငျတပွီးရုးတဲ့မပိုငျလငျတရူးရောဂါပါ။
(၇) ၀ါသနာ ဗီဇ လား ပတျဝနျးကငျြကွောငျ့လားးး ။
၀ါသနာအရဆိုရငျတော့ အမိ စိတျဓါတျအဆငျ့ကို ပွနျတိုငျးသငျ့ပါတယျ ။ ၀ါသနာဆိုတာ သူတပါးကိုမထိခိုကျစရေဘူးလေ ၊ ဗီဇ ဆိုရငျတော့ အမိရဲ့ မိဘမြိုးရိုးကို လိုကျဖှရှောရလိမျ့မယျ မြိုးရိုးလိုကျတာပဲလားလို့ ပေါ့ ။ ဘယျလိုပဲပတျဝနျးကငျြက မကောငျးပစေ သူတို့ ပွောတဲ့ အတိုငျးလုပျဖို့ သူတို့ လုပျတဲ့ အတိုငျးလိုကျကငျြ့ဖို့ သငျ့မသငျ့ ဆုံးဖွတျရှေးခယျြတာက အမိနဲ့ ပဲဆိုငျတယျ ။ ကိုယျတိုငျက သာယာခငျြနတောကို ဝနျခံရလိမျ့မယျ။
(၈) ဝဋျကွှေးးကွောငျ့လား ။
ဝဋျကွှေး ဆိုတဲ့ စကားက မပွောခငျြဆုံးစကားပဲ ။ အိမျထောငျသညျယောကျြားတဈယောကျကို စှဲလမျးမိတာ ဝဋျကွှေးတဲ့လား ။ ဝဋျကွှေးကွောငျ့ စှဲလမျးမိသှားတာပါတဲ့ လား ။ ကမ်ဘာ့ ရယျစရာအကောငျးဆုံးဟာသ မှတျတမျးထဲ အဲ့ စကားထညျ့ပေးရမယျ ။ အမိကို အပိုငျဖမျးလိုကျ ဗလက်ကာရပွုလိုကျပွီး သိမျးပိုကျထားလို့ မယားငယျ ကီပငျဘဝရောကျသှားတယျ အဲ့ ဒီ့ အိမျထောငျသညျယောကျြားက မတရားသိမျးပိုကျတယျဆိုရငျ ဝဋျကွှေးလို့ ပွောရငျ တျောသေးတယျ ။ အခု အမိကစှဲလမျးနတော အမိကမပွတျနိုငျတာက ဝဋျကွှေးတဲ့ လား hak hak။
*** အိမျထောငျသညျယောကျြားတဈယောကျအပျေါ စိတျညှတျနပွေီ စှဲလမျးနပွေီဆိုရငျ ဒီ ၈ ခကျြကို ကိုယျ့ဘာသာကိုယျပွနျမေးပွီး တှေးကွညျ့ပါ ။ ပွီးရငျထညျ့တှကျရမှာက အမိရဲ့ အရှကျတရားနဲ့ ပကျသကျတဲ့ အသိစိတျ အမိခေါငျးထဲမှာဘယျလောကျကနျြသလဲ တိုငျးတာသငျ့တယျ ။ အရှကျမရှိဘူးဆိုရငျ ဆကျတိုးပေါ့ ။ ရှကျတတျတယျဆိုရငျတော့ ဆငျခွငျသငျ့တာ ဆငျခွငျလိမျ့မယျ ။ ဘာသာကိုးကှယျမှုတှတေော့ထညျ့မပွောတော့ပါဘူး ။
မှတျသငျ့တာကတဈခုပါပဲ ။ အမိလုပျသလို တခွားမိနျးမတဈယောကျလဲလုပျနိုငျတယျဆိုတာပါပဲ ။ အမိအခု သူတပါးလငျကို စှဲလမျးတယျဆို အမိလိုပဲတခွားမိနျးမတဈယောကျကလဲ သူ့ ကို စှဲလမျးမယျ ။ အဲ့သလိုပဲ အမိနဲ့ဆုံစဉျ အမိအပျေါသူတိမျးညှတျတယျဆို အမိမဟုတျတဲ့ တခွားမိနျးမဆိုရငျလဲတိမျးညှတျမှာပါပဲ ။ ဒါဟာ ဘာသာကိုးကှယျမှု နဲ့ မဆိုငျတဲ့လူတိုငျးနဲ့ ပဲဆိုငျတဲ့ နိယာမပါ ။***
### အထကျပါအခကျြတှကေ အပြိုတဈယောကျက အိမျထောငျသညျယောကျြားတှကေို စှဲလမျးတဲ့ အကွောငျးတှဖွေဈပွီး အိမျထောငျသညျယောကျြားက တိမျးညှတျတဲ့ အခွအေနပေါ ။ ကိုယျ့ကို မတိမျးညှတျပဲ အိမျထောငျရှငျမကို သစ်စာရှိတဲ့အိမျထောငျသညျယောကျြား ကို စှဲလမျးတဲ့ သူတှကေိုတော့ တဈခုပဲပွောခငျြပါတယျ ။ ကိုယျ့အဆငျ့ကိုယျသိ ကိုယျ့နရောကိုယျသိ မဖွဈနိုငျတာမမှနျးနဲ့ယောကျြားရှားနတေယျလို့ ထငျရငျ သတ်တဝါ အမြားအပွားရှိပါသေးတယျ ။ ရိုငျးမှာစိုးလို့ မပွောတော့ဘူး ကိုယျ့ဘာသာကိုယျ ဉာဏျမီသလောကျတှေးကွညျ့ပါ ။ သူတပါးရဲ့ သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝကို မဖကျြဆီးပါနဲ့။ သူ့ ဘာသာသူ မသာယာရငျလဲ နဂိုအတိုငျးပဲရှိပါစေ အမိကွောငျ့တော့ မပွိုပကျြပါစနေဲ့ ။
Credit: ပြိုမတေို့ သိစဖေို့